siilka qoyan iyo kan qalalan kee macaan - iftineducation.com
siilka qoyan iyo kan qalalan kee macaan
aadan21 / February 5, 2017
iftineducation.com – warbixintaan oo aan ka soo xignayay jariidada dellabeta oo ah jariidad bile ah kana hadashada arimaha bulshada ayaa maanta bogeeda hore ku soo daabacday in nimanka aysan waligood ilaabin naagaha dareenkooda uu xad dhaafka yahay,
jiriidada ayaa sameesay warbixinta ayaa sheegtay in 1200 oo nin ah oo aan naagahooda wali furin in ay wareysi la yeelataay taasoo intabadan nimanka ay sheegeen wax yaabaha ay naagahooda aysan ku ilaabi karin ay kamid tahay iyagoo xiliga galmada ama isku tagista naagahooda ay dhahaan ereyo dareenka sii kiciya taas nima`nka ka dhigta kuwa soo xasuusta naagahooda markasta, 89% ayaa isku raacay in raggane ay san damcin dumar kale.
Warbixinta ayaa sheegeesa in naagaha dareenka badan nimankooda ay adagtahay si ay ku guursadaan ama kula saaxiibaan naago kale,Heegan24.net warbixinta ayaa sheegtay in dhismaha iyo wada jirka uu qeeb katahay dumarka dareenkooda aadka usareeyo.
mid kamid ah gabadhaha lagu soo qaatay warbixinta ayaa sheegtay in aysan dareenkeeda sidaa usii badneen laakiin ay sheegtay in xiliga ninkeeda la xaajooneeso ay iska dhigto naag dareen badan taas ayaa iigu wacan ayee tiri in ninkeyga wali aad ii xiiseeyo.
Julia Rikna oo ah dhaqtar ah kana qeeb qaadatay warbixintaan muujisay kaalinta ay ka qeeb qaadan karaan dumarka in ay raggooda ku dadaalaan.
Warbixinta ayaa sheegtay in jaceylka kaliyaha uusan reerka isku heen, tani tahay mid laga maarmaan ah.
gabdhaha galmada maka sheekeystaan haaaaa
Raaxada naagaha gaagaaban